PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-04-08 - Unzuza ukhonze ukuchitha isikhathi nomndeni wakhe
Unzuza ukhonze ukuchitha isikhathi nomndeni wakhe
SIKHONZE ukuzihlalela nomndeni waso uma singasebenzi isikhulu esiphezulu kumasipala wetheku, umnu Sipho Cyril Nzuza.
Umnu Nzuza osekuphele isikhathi esingaphezulu konyaka eqhoqhobele isikhundla sokuba yimenenja yalo masipala uthi lesi yisona sikhundla esinzima kunazo zonke aseke waziqhoqhobala empilweni.
Uthi ngemuva kokuphothula umatikuletsheni wakhe emlazi Commercial ube nenhlanhla yokuthola itoho njengotolika enkantolo yemantshi yasemlazi.
Ngemuva kokusebenza enkantolo lapho ebebuye asebenze ngaphakathi ehhovisi unyelwe yinyoni emhlophe eqashwa ukuyosebenza estandard Bank, lapho ekhule ngaphakathi kulona waze wagcina etshalwa Kwanongoma ukuyophatha igatsha lakhona.
Umnu Nzuza ozalelwe wakhulela emlazi esigcemeni kwa-v uthi esakhula ubebizwa ngobobbin ngenxa yokuthi unina ubethunga.
Uthi esekwanongoma yilapho ehlangane khona nobambo lwakhe unkk Gcina Nzuza obefundisa Kwagqikazi nakuba ebedabuka empangeni.
Uqhuba ngokuthi ngesikhathi esebenza ebhange ubenza izifundo ze-b Com in Accounting and Auditing, enyuvesi yaseningizimu Afrika (UNISA).
Ushiye ebhange wajoyina inkampani yabacwaningi mabhuku ipricewaterhousecoopers.
Usebenzele izinkampani eza- hlukene zokucwaninga amabhuku okubalwa kuzo nesizwentsaluba lapho ebesebenza khona nenjinga umnu Sizwe Nxasana.
Uke wasebenzela nenkampani ekhiqiza ubhiya eyifinancial Planner yale nkampani ebalwa nezinye ezinkulu kuleli.
Ngesikhathi esebenza ezinkampanini ezahlukene ubengamile ezifundweni zakhe njengoba eke wenza esehigher Diploma in Accountancy nezehigher Diploma in Taxation aziphothule e-university of Durban Westville waphinde wathola neze-mba azithole esikhungweni esifanayo.
Umnu Nzuza oke wasebenza njengemarketing Manager kwatransnet ethekwini naseRichards Bay uthi nakuba esesebenze ezindaweni ezahlukene kodwa ufunde lukhulu ngokuhlala kumabhodi ezinkampani ezahlukene, amanye awo abengusihlalo wawo njengoba eke waphatha ibhodi lasethala Bank kanti futhi uke waba nawusihlalo wekomidi elicwaninga amabhuku ethekwini.
“Ukusebenza kula mabhodi ikakhulukazi athinta ukubhenka kungifundise okuningi ngokuqikelela ngoba ebhange yonke into kumele ihambe ngohlelo futhi iqonde, kungabibikho ucobho,” kuveza umnu Nzuza oke waphatha ichweba lasekapa aziqhenya kakhulu ngakwenzile kulona.
“Ukuphatha ichweba lasekapa ngenye yezinto engiziqhenya ngayo ngoba kuningi okwenzekile ngesikhathi sami okuyohlale kuwumlando,” esho.
Uthi kusukela ekukhuleni kwakhe akakaze azihlanganise nepolitiki ngaphandle uma kunemihlangano ekhona endaweni.
Ubengumuntu ogxile ezifundweni.
Kuyacaca ukuthi ungumuntu ohlale ematasa njengoba eveze ukuthi umsebenzi wakhe uthatha isikhathi esiningi sakhe kodwa usethathe isinqumo sokuthi angabe esasebenza ngezimpelasonto ukuze akwazi ukuthola ithuba nomndeni wakhe.
“Sikukhonzile ukuchitha isikhathi ndawonye nomndeni wami ngakho izimpelasonto ngezami nomndeni wami. Ngaphandle komndeni ngingumuntu okukhonzile ukufunda nokucwaninga uma kukhona lapho ngingaqondi khona,” kusho umnu Nzuza ekhombisa intatheli izincwadi azimisele ukuzithola maduze azifunde.
Kulezi zincwadi kukhona esihloko sithi “The Chessboard and The Web” ebhalwe ngu-anneMarie Slaughter nenye ethi “A World In Dissaray” ebhalwe nguRichard N Haass.
Umnu Nzuza obusiswe ngamadodana amathathu. Ukukhonzile futhi nokuzivocavoca ukuze ahlale ewumqemane.
UKUSEBENZA EMABHODINI KUNGIFUNDISE OKUNINGI...
UMNU Sipho Nzuza oyimenenja kamasipala wetheku obenengxoxo ekhethekile nentatheli YELANGA Langesonto ngempilo yakhe.